नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे....... - Everest Talk
नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे…….1 min read
कहिले टायर पम्चर हुन सक्छ, त्यो अवस्थाका लागि पूर्व तयारी हुनु आवश्यक छ । न कि टायर पम्चर भएपछि मात्र रबरको रूख रोप्ने योजना बनाउनु ।
२०७६, ७ माघ मंगलवार १७:५८
विमानस्थलमा एउटा र्बोड छ, जहाँ लेखिएको छ– वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली ।
अक्षर फुटाउन नसक्नेलाई कसैले त्यो बोर्डमा यसो लेखेको छ भनेर भन्दिने हो भने कसो गर्लान् ? पढेलेखेकाहरूले त्यो बोर्ड पढिसकेर देशको बारेमा के सोच्लान् ? अरूले त्यो बोर्ड देख्दा के बुझ्छन्, म त्यसको जिम्मा लिन सक्दिनँ, तर मैले मेरै जिम्मा लिएर भन्ने हो भने उक्त बोर्डले मेरो देशको हैसियत खुलाउँछ ।
दिनभर विमानस्थलमा गएर हातमा पासपोर्ट च्यापेका नेपालीलाई किन विदेश जान लाग्नुभएको भन्ने हो भने उनीहरूको जवाफ हुन्छ– देशमा के छ र ? के गर्नु देशमा बसेर ?
देशमा सम्भावना नदेखेर देश छाड्नेको लर्को लामै छ । र देशमै सुन फलाउन कम्मर कसिँरहेका युवाको पनि नाम संकलन गर्ने हो भने थोरै पानामा अटाउँदैन ।
देशमा सम्भावना देख्ने र नदेख्ने युवाको बैठक गराउने हो भने, सम्भावना नदेख्नेले सहजै जित्न सक्छन् भन्ने अनुमान मेरो छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै श्रम मन्त्रालयमा आफ्नो नाम दर्ता गराएर रोजगारका लागि हिँडेकाहरूको सङ्ख्या लगभग ६ लाखको हाराहारीमा पुगेको छ । चोर बाटो र खुल्ला नाकाबाट कति गए भन्ने कुराको तथ्याङ्क न मलाई थाहा छ, न त देशलाई नै । यसको मतलब देशमा सम्भावना नदेखेर नै उनीहरू परदेश लागेका हुन भन्ने कुरा पुष्टि हुनजान्छ ।
देशमा बेरोजगारी बढ्नुको मुख्य कारण राजनैतीक अस्थिरता हो । राजनैतीक पहुँच स्थिर नभएका कारणले नै युवावर्गको सोचलाई देशको सीमाभन्दा बाहिर नै भविष्य खोज्ने कारण बनेको छ ।
गाउँको विद्यालय हिँडेको कुनै एक बालकलाई ठूलो भएर के गर्छौ ? भन्ने प्रश्न तेर्साउने हो भने जवाफमा “विदेश जान्छु” भन्ने अवस्था छ । प्रत्येक घरबाट एक न एक जना विदेश गएकै कारणले बाल मस्तिष्कमा विदेशको छाप बस्नु कुनै नौलो कुरा पनि होइन ।
चिया पसलमा देश कसरी बनाउने भन्ने योजना चियाको चुस्कीसँगै सेलाएर जान्छ । देश बनाउने मौका कुनै संसदमा एकअर्कालाई आरोप लगाउँदैमा बित्छ ।
यसरी हरेकक्षण देश बोकेर उभिएको युवालाई जब सरकारले अविश्वासको बाण हृदय छचल्किने गरेर तेर्साउँछ । त्योबेला राष्ट्रभक्तिको गीत रोइरहेको हुन्छ ।
देशमा बस्ने अवस्थाभन्दा पनि बाँच्ने अवस्था नै मुख्य कमजोरी रह्यो भने देश रित्तिन्छ । अहिलेको देशको अवस्थामा बाँच्न नै मुस्किल रहेको छ । अनेकन महँगी, सरकारसँगको अविश्वास नै मुख्य जड रहेको पनि छ ।
देशमा बढेको बेरोजगारीले समस्यामाथि समस्या थपिनु सरकारकै हानी हो । युवापुस्तालाई रोजगार दिए वा रोजगार नै दिन नसके पनि युवापुस्ताले गरेको उद्यममा सरकार अभिभावक बनेर खडा मात्र भइदिए यसरी देश दिनानुदिन रित्तो बन्ने थिएन ।
बेरोजगारीकै कुरा गर्ने हो भने देशमा बेरोजगारीको सङ्ख्या ११.४ प्रतिशत पुगेको केन्द्रीय तथ्याङ्कले बताउँछ, जसअनुसार बेरोजगारको संख्या ९ लाख ८ हजार रहेको जनाइएको छ । तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी पुरुष ५ लाख ११ हजार बेरोजगार छन् । ३ लाख ९७ हजार महिला बेरोजगार रहेको उल्लेख छ ।
त्यसो त सरकारले गत भदौमा बेरोजगारलाई भत्ता दिलाउने निर्णय सार्वजनिक गर्यो । वा सरकारले भन्यो बेरोजगार हुनुहुन्छ भने हामी तपाईँलाई रोजगार वा निवार्ह भत्ता प्रदान गर्नेछौँ । उक्त कामको शिलशिलामा क्षितिजमा देखिएको बत्तीझैँ भएको छ । उज्यालो त देखिन्छ, तर त्यसको प्रकाश भने पाइँदैन । सुन्दा मात्र मीठो ।
सरकारकै आलोचना मात्र गर्दा फाइदा पनि छैन, किनकि केही वर्षयता देशको आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलो परिवर्तनचाहिँ आएकै हो । तर कहाँ र कसरी भन्ने कुराचाहिँ खोज्न जरुरी नै रहेको छ ।
हामी आर्थिक अवस्थालाई मजबुद बनाउन व्यापार–व्यापार भनेर कराइरहेका छौँ, तर व्यापारलाई नजिकबाट हेर्ने हो भने गत साउन ३ गते सेतोपाटीका सम्पादक अमित ढकालले सेतोपाटीमा लेखेका छन्– “पछिल्लो दस वर्षमा हाम्रो व्यापार घाटा पाँच गुणा बढेको छ । यति तीव्र रफ्तारमा व्यापार घाटा इतिहासमै बढेको थिएन । दस वर्षअघि हामीले ६८.६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सामान विदेशमा बेचेका थियौं । त्यो वर्ष हामीले विदेशबाट २९१ अर्ब बराबरका सामान किन्यौं । व्यापार घाटा २३० अर्ब रुपैयाँ जति थियो । गत आर्थिक वर्ष हामीले ८१ अर्ब बराबरका सामान विदेशमा बेच्यौं भने १२४३ अर्ब बराबरका सामान विदेशबाट किन्यौ । व्यापार घाटा ११६२ अर्ब पुग्यो ।”
यसलाई सहज तरिकाले हेर्ने हो भने हाम्रो व्यापार व्यवस्थालाई पनि तिलाञ्जली नै दिनुपर्ने अवस्था छ ।
हरेक कुरामा ठक्कर खाएको युवालाई जब पासपोर्टको भर लाग्छ, तब देशले युवाबाट आस गर्नुपर्ने कुनै पनि कुरा बाँकी रहँदैन ।
बेरोजगारीको सङ्ख्या दिनमा दुइगुणा र रातमा चौगुना भएर बढिरहेको अवस्था छ । उपल्लो दर्जा, जसलाई अभिभावक हामीले बनाएर पठाएका छौँ, त्यो समूह कुर्सी बाँडफाँडमा नै व्यस्त देखिएको छ ।
सत्ता र विपक्ष नै प्रश्न र जवाफको सिगौँरी खेलिरहनु पनि देश बन्ने संकेत भने होइन । यसले देशको धरातल नाप्न सक्छ । काम गर्नेलाई काम गर्न दिने हो, तर कामको नाममा लुटको साम्राज्य फैलाउनेलाई चाहिँ रोक्नु विपक्षको धर्म हो ।
देश हाँक्न भनेर चालकको सीटमा बसेपछि चालकले यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्याउनु पर्दछ । हामीले बुझेको यति हो । कहिले टायर पम्चर हुन सक्छ, त्यो अवस्थाका लागि पूर्व तयारी हुनु आवश्यक छ । न कि टायर पम्चर भएपछि मात्र रबरको रूख रोप्ने योजना बनाउनु ।
देश युवाको हो, देश नै रित्तिएपछि सत्तामा हुनुको के अर्थ रहन्छ ? युवा केन्द्रीत रहेर कार्यक्रमको उत्कृष्ट खाका बनाउनु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो ।
हामीसँग स्रोत र साधन छ, त्यसलाई मध्यनजर गरेर लगानीकर्ता खोज्ने मात्र हो भने लगानीको खोला देशकै माटोमा बग्न सक्छ । बेरोजगारी हटाउनु पर्दैन, रोजगार दिए पुग्छ । देशको गीत बचाउनु छ भने पहिले देश बचोस् ।
Tags: निरज दाहालनेपाली हामी